တရုတ် Richina - ဂေါ်ပြားတူးကာဗွန်သံမဏိဥယျာဉ် Tools များ
ဂေါ်ပြားတူးကာဗွန်သံမဏိဥယျာဉ် Tools များ
Basic Info Model No.: FS-010-1 Specification: Medium Application: Garden Shovel, Farming Shovel Handle Material: Wood Shape: Sharp Spade Function: Multifunctional Folded: Unfolded Attachment: Attachment Customized: Customized Color: Other Overall Length: 105cm Handle: Ash Wood Handle Head Material: Carbon Steel Additional Info Packaging: 5pcs/bag Productivity: 100000pcs per month Brand: Richina Transportat...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: FS-010-1
လျှောက်လွှာ: ဥယျာဉ်ရေမှုတ်များ, စိုက်ပျိုးရေးရေမှုတ်များ
: ပစ္စည်းကိုကိုင်တွယ် Wood က
ပုံသဏ္ဍာန်: Sharp ကဂေါ်ပြား
ယေဘုယျအား Length: 105cm
ကိုင်တွယ်: Ash ကို Wood ကကိုင်တွယ်
ထုပ်ပိုး: 5pcs / အိတ်
productivity: တစ်လလျှင် 100000pcs
HS Code ကို: 8201100010
ကာဗွန်သံမဏိ ဥယျာဉ်တော် Tools များ ဂေါ်ပြားတူး
ပိုမိုလွယ်ကူတူးနှင့်အပိုရှည် socket အဘို့အကုသဦးခေါင်းနှင့်အတူဂေါ်ပြားတူးကာဗွန်သံမဏိတစ်ခုတည်းအပိုင်းအစကနေအစိုင်အခဲအတုဖြစ်ကြောင်း, အပူအပိုဆောင်းခွန်အားနှင့်သက်တမ်းအဘို့အကုသ
မြေဆီလွှာတွင်သံချေး, ခြစ်, စိုထိုင်းဆနှင့်အယ်ကာလီမှတိုးတက်လာသောခုခံဘို့ခေါင်းကို coated တူ finish ကို epoxy
သာ. ကြီးသက်တမ်းများအတွက် weatherproofed တစ် wishbone လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရန်နှစ်ခုသောနေရာများနှင့်အုပ်စုခွဲအတွက် riveted ရိုးရာအင်္ဂလိပ်စတိုင်တဦးတည်း-piece အသစ်မာရိုးနှင့်အတူဂေါ်ပြားကိုတူးကာဗွန်သံမဏိ,
အဆိုပါဂေါ်ပြားဂေါ်ပြားပိုအဆင်ပြေတူးကြဆွကြဘို့ treaded ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာထုတ်ကုန်ကိုသိ, သူတို့ကအလွန်လျင်မြန်သငျသညျတုံ့ပြန်ချက်ပေးနှင့် professinal ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုငျပြီးနောက်။
ဂေါ်ပြားထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတူးစံပြကာဗွန်သံမဏိရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ကာဗွန်တူး Tools များရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံများမှာ ဥယျာဉ်ဂေါ်ပြား တူးရွင်းပြား။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ယခင်: ပလတ်စတစ် Blade ကိုအတူတယ်လီစကုပ်မော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ
နောက်တစ်ခု: Wear မြှောင်နှင့်အတူပလတ်စတစ်နှင်းရေမှုတ်များ
ဥယျာဉ် Mini ကိုဂေါ်ပြား
ဥယျာဉ် Tools များတူးရွင်းပြားဂေါ်ပြား
ဂေါ်ပြားဂေါ်ပြားစိုက်ပျိုးရေး Tools များသည်
ရေမှုတ်များ၏ Set ပလပ်စတစ်ကလေးများဥယျာဉ် Tools များ
Wood ကလက်ကိုင်နှင့်အတူကလေးများဥယျာဉ်လက် Tools များ
ဥယျာဉ်တော် Wing Weeder ပေါင်းပင်ဟိုး
ဂန္ထဝင် Long ကလက်ကိုင်မီးသီးစိုက်ပျိုး
သံမဏိကလေးများ Trowel နှင့်ချိတ်